Qhagamshelana nedatha, i-AutoCAD Imephu - I-Bentley Imephu - i-Geofumadas
Xhuma kwiDatha, i-AutoCAD Imephu - I-Bentley Imephu
Epreli, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Kule post ndifuna ukuthelekisa iindlela ezifikelele kuyo yolwazi kunye nezikhundla ze-geospatial ze-AutoDesk kunye neBentley.
AutoDesk Civil 3D 2008 (Enoba i-AutoCAD Imephu)
Bentley Imephu V8i
AutoCAD Civil 3D 2008 Bentley Imephu V8i
Ifayile, xhuma kwiDatha ... Xhuma:
Izicwangciso, database, qhagamshela
I-AutoCAD igxininisa apha zonke iindlela zokunxibelelana nedatha:
Umfanekiso ogqithisileyo okanye uLuhlu
Ukongezwa ukusuka kwi-Import ukungena kwi:
mif. ithebhu (Mapinfo)
ESRI (.shp, e00, E00, i-ArcInfo Coverages)
GML (gml, xml, gml.gz) kunye ne-MasterMap
i-sdts (khuthazwa yi-USGS)
vpf, ft (Ukusuka kumgangatho wempi)
I-Bentley apha igcina kuphela ukudibana kunye neenkcukacha:
OLEDB nge udl (SQL Server kunye ne-Oracle)
BUDBC (OLE DB, SQL Native, nabanye abavela kwiMicrosoft)
Ukusuka kumphathi weRaster, idatha ifumaneka:
ESRI (mxd ne lyr)
Olunye uhlobo amaqanda, izakhiwo ezingaphezulu kune-AutoDesk kodwa akufani.
Ukusuka Ukungenisa ukungena kwi:
I-Oracle Spatial (njengedatha ye-GIS)
Iifayile zeSpp (njengefayile ye cad)
Ukuvulela ukuvula ukufikelela:
Ayikwazi ukufikelela kwedatha:
IWFS (iinkonzo zeenkonzo zewebhu)
Nangona ezinye zazo zingenziwa nge-ODBC.
Ngokubanzi, izixhobo zombini ziphantse zifana nezixhobo ezifanayo, nangona kwimeko ye-AutoDesk ibagxininisa ngakumbi kwiphaneli enye yoxhumano kwiinkonzo zedatha. Kwimeko yeBentley abanye babo bavela kumphathi we-raster, ukungenisa nokuvulwa.
Kule AutoCAD iimeko ezingcono kuneBentley, ubuncinane ekufikeleleni kwi-MySQL nedatha kunye ArcSDE kunye ne-MapGuide, ngaphandle kokuba uphumelele kwizixhobo ngezixhobo nge-ODBC.
Njengoko imilinganiselo OGC, AutoCAD sizisa uncedo lokufumana WFS, nangona wms ixesha phambili ngenxa Bentley yenza le nguqulelo V8i njengoko wenzayo AutoCAD phambi ... ingxelo, andikhange usebenzisa uguqulelo 2009. Nangona kunjalo, kulezi ziqendu zombini zishiywe ngasemva, zicinga ukuba amathuluzi aphantsi okanye akhululekileyo akwenza ngokugqithiseleyo ... makungabikho ncedise idatha.
Ukuvula okanye ukungenisa idatha i-AutoDesk inamaphepha angaphezulu kweBentley Map, sibeka imizekelo engundoqo nangona oku kungacaciswanga njengokuxhuma kwedatha kuba kufuneka ingeniswe.
Njengoko AutoCAD uye iifomati yeraster ngaphandle kokuba Microstation, kodwa ngokuqhelekileyo egcinwe AutoCAD umphakamo idatha ethile kakhulu eqhelekileyo ESRI kusetyenziswa. I-AutoDesk inqoba idilesi "yokudibanisa" kwidatha, ngoxa uBentley "engabiza umnxeba". Bobabini bayangena kwiifomati zokubamba i-radar, bambalwa kakhulu, ukuthetha ubuncinci.
I-AutoCAD Imephu AutoDesk Bentley Systems ESRI shp
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Bentley Imephu ufuna ukuba ufuduke kwiV8i
Post Next Ukulungiselela uhambo lwam ukuya eHoustonOkulandelayo "